Bilateral Vasectomy (အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခွဲစိတ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Bilateral Vasectomy (အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခွဲစိတ်ခြင်း)
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Bilateral Vasectomy (အမျိုးသား သားကြောဖြတ်ခွဲစိတ်ခြင်း)
အမျိုးသားများသားကြောဖြတ်ခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းကလေးမရနိုင်တော့အောင် ခွဲစိတ်ကုသပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီခွဲစိတ်ခြင်းဟာ ဝှေးစေ့မှာရှိတဲ့ သုက်ပိုးများကိုယောက်ျားတန်ဆာဆီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ သုက်ပို့ပြွန်၂ခုကို ဖြတ်တောက်ပေးလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သုက်ပိုးများဟာသုက်ရည်ထဲမရောက်နိုင်တော့ပါဘူး။ သုက်ရည်ထဲသုက်ပိုးမပါတဲ့အခါ မမျိုးဥနဲ့ မပေါင်းနိုင်တော့တာမို့ ဒီနည်းကိုကလေးမရဖို့ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သင်နဲ့ သင့်အိမ်ထောင်ဖက်ဟာတခြားသားဆက်ခြားနည်းတွေ မသုံးချင်တော့ရင် ဒီနည်းကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
အမျိုးသားများသားကြောဖြတ် ခွဲစိတ်ခြင်းမခံယူခင် ဘာတွေသိထားသင့်သလဲ
ဒီခွဲစိတ်မှုကြောင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ခံစားမှုမှာကျဆင်းမသွားပါဘူး။ သုက်ရည်ထွက်မှုလည်းကျမသွားပါဘူး။ ဒီခွဲစိတ်မှုဟာဘေးကင်းတာများပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ခြေပြသနာတွေကိုအရင်သိထားဖို့ လိုပါတယ်။
ဒီခွဲစိတ်မှုကိုမခံယူခင်မှာသတိပြုရမယ့်အချက်တွေနဲ့ သတိပေးချက်တွေကိုနားလည်သိရှိထားဖို့ လိုပါတယ်။ သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် သင့်ရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပါ။
သားကြောဖြတ် ခွဲစိတ်မှု မလုပ်ခင် ဘာတွေလုပ်သင့်သလဲ
ခွဲစိတ်မှုကိုမေ့ဆေးပေးပြီးလုပ်ဆောင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မခွဲခင်မှာ ဆရာဝန်ရဲ့ ညွှန်ကြားချက်နဲ့အညီဆီးခုံမွေးတွေကိုရိတ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင် သန့်ရှင်းအောင် ဆေးကြောထားရပါမယ်။ သင်ဆန္ဒရှိရင် အစားနည်းနည်းစားနိုင်ပါတယ်။ ရေခဲအိတ်လုပ်ပြီးယူဆောင်သွားဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဆေးရုံကိုသွားရင် အဖော်တယောက်ယောက် ခေါ်သွားသင့်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်မှုမှာမေ့ဆေးပေးခြင်း ပါဝင်ပြီး ၁၅မိနစ်ကနေ မိနစ်၂၀ထိ ကြာနိုင်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ ကပ္ပါယ်အိတ် တဖက်ဆီမှာအနည်းငယ် ခွဲကြောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ တခါတရံအလယ်ကနေခွဲတတ်ပါတယ်။ ပြီးတဲ့အခါ ကပ္ပါယ်အိတ်ကနေယောက်ျားတန်ဆာဆီသွားတဲ့ သုက်ပို့ပြွန်ကို ဖြတ်တောက်ပြီးအနားနှစ်ဖက်ကိုမဆက်သွယ်နိုင်တော့အောင် ပိတ်ချုပ်လိုက်ပါလိမ့်မယ်။
ဝှေးစေ့များဟာ ရက်အနည်းငယ် နာကျင်နေနိုင်ပါတယ်။ ၂ရက်လောက် နားပြီးတဲ့အခါ လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ အင်အားသုံးရတဲ့ အလုပ်ဆိုရင်တော့ တပတ်လောက်နားသင့်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ခြင်းဟာပုံမှန်လှုပ်၇ှား သွားလာနိုင်တဲ့ အနေအထားကို မြန်မြန် ရောက်နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းမလုပ်ခင်မှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ပေးသူများနဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ဆရာဝန်ဟာ ခွဲစိတ်ပြီး အကြိမ်၂၀လောက် သုက်ရည်ထုတ်အပြီးမှာသုက်ရည်နမူနာကိုရယူပြီးသုက်ပိုးပါနေခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။
သိလိုတဲ့အချက်တွေရှိရင် သင့်ရဲ့ခွဲစိတ်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပါ။
ခွဲထားသည့်နေရာ ပိုးဝင်ခြင်း၊ ဝှေးစေ့ ပိုးဝင်ခြင်း
အကယ်၍ ဖြစ်ပွားနိုင်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုသိရှိလိုလျှင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဩဂုတ် 2, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဧပြီ 24, 2018
Surgery for anal fistula. https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/surgicalbrochures/surgery-for- anal-fistula.
Abscess and Fistula Expanded Information. https://www.fascrs.org/patients/disease-condition/abscess- and-fistula-expanded- information. 08 Mar 2016
သုက်ပိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အလွဲတွေနဲ့ မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး
လိင်ဆက်ဆံပြီးပြီးချင်း ဆီးသွားဖို့ လိုအပ်လား